2021 mari yekushanyirwa isingasviki hafu yematanho epamberi pehosha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » 2021 mari yekushanyirwa isingasviki hafu yematanho epamberi pehosha
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Kurwisa • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • misangano • nhau • Rail Kufamba • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mari yepasirese yekushanya neyekushanya inofungidzirwa kuti inosvika chete $ 385 bhiriyoni muna 2021, isingasviki hafu pre-COVID-19 mazinga.
Denda re COVID-19 rakakonzera kudzikira kukuru kwemusika munhoroondo.
Lockdown inotonga kudzora kupararira kwehutachiona, zvakatungamira kuzviuru zvezororo rakamiswa, uye mahotera akavharwa.
Yakazara mari inorasikirwa nemusika wekufamba uye wekushanya unotarisirwa kupupura gore rino wakakura.
Nyika dzapasi rose dzakatanga kugadzirira zhizha 2021 kutanga kwegore kumutsidzira kufamba kuenda kunharaunda yavo uye kugonesa vashanyi kushanya zvakachengeteka.
Yakazara kukiyiwa mumwedzi yekutanga ya2021, kuwedzerwa kuyedza kugona, uye kunyangwe kurambidzwa kwakakwana kune vasiri-vanokosha vanosvika, kunyanya kubva kunyika dzine hutachiona hwehutachiona, zvese zvave zvikamu zvezviyero izvi. Nekudaro, izvo zvaive zvisina kukwana kumisa kuwanda kwekurasikirwa kunokonzerwa nehutachiona hwekukanganisa kwakanangana nekushanya uye zvimwe zvikamu zvakabatana zvakanyanya nazvo.
Zvinoenderana neazvino indasitiri data, iyo yepasirese yekufambisa uye yemari yekushanya inofungidzirwa kuti inosvika chete $ 385 bhiriyoni muna 2021, isingasviki hafu pre-COVID-19 mazinga.
Cruise neHotera Indasitiri iyo Yakaipisisa Hit, Yakasanganiswa Revenues Yakadzikwa ne $ 258 bhiriyoni
Iyo COVID-19 yakakonzera kudzikisira kukuru kwemusika munhoroondo, sezvo nyika pasi rese dzakatemera mitemo yekukiya kudzora kupararira kwehutachiona, zvichitungamira kuzviuru zvezororo rakamiswa, uye mahotera akavharwa. Kunyangwe vazhinji vacho vakabvisa mabhaisikopo ekufamba uye vakavhurwazve mwaka wezhizha we2021, kurasikirwa kwese kwemari pamusika uyu kunotarisirwa kupupura gore rino kuchiri kukuru.
Muna 2020, mari yemubazi rese yakadzikira neinosvika 60% YoY kusvika kumadhora mazana maviri nemakumi masere neshanu emadhora, yakaratidza data razvino. Kunyangwe hazvo huwandu uhu hunotarisirwa kukura neinosvika makumi matatu kubva muzana kusvika pamadhora mazana matatu nemakumi matatu neshanu nemakumi matatu nemashanu emadhora mugore ra298.5, ichiri madhora zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nechidimbu pasi peapo denda risati rasvika.
The indasitiri yezvikepe inoramba iri chikamu chakanyanya kurohwa pamusika wepasirese wekushanya uye wekushanya. Muna 2021, mari dzepasi rose dzinoenda kunosvika chete $ 6.6 bhiriyoni, kana 76% yakaderera pane muna 2019. Indasitiri yehotera inotevera ne $ 132.3 bhiriyoni mumari uye 64% inodonha mumakore maviri. Kunyangwe mamirioni evashanyi akafunga kuenda kuzororo mumwaka wa2021, zviverengero zvinoratidza kuti mari yakabatanidzwa yezvikamu zviviri izvi ichasara iri $ 258 bhiriyoni pazasi pematanho epamberi pehosha.
Yakachipa pashiri Ekuenda Kunotenga kuLouis ...
Embassy yeUS muEswatini yambiro: Gara Kumba!
Bangkok Nhandare dzeKushanda se COVID-19 Munda Zvipatara